विमानस्थलभित्रै भएको जहाज दुर्घटनाले उब्जाएका सात प्रश्न - Naya Patrika
युएस–बंगला एयरलाइन्सका उच्च अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेअनुसार जहाज दुर्घटनामा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटिसी)को हात रहेको आरोप लगाइएको छ । एटिसीले समयमा उचित सूचना दिन नसक्दा पाइलट झुक्किएको युएस–बंगला एयरलाइन्सको दाबी छ । तर, त्रिभुवन विमानस्थलका अधिकारीहरूका अनुसार एटिसीले दिएको निर्देशन सही पालना भएको भए पूर्वनिर्धारित समयमै सुरक्षित अवतरण सम्भव थियो । एउटा दिशाबाट अवतरणको अनुमति दिइसकेपछि पनि अर्को दिशातर्फ मोडिनु, आकाशमा छँदा कुनै इमर्जेन्सी घोषणै नगरी अवतरणका लागि तयार भएपछि एटिसीले थप निर्णय लिने मौका नपाएको महाप्रबन्धक क्षेत्रीले बताए ।
तर, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका सुरक्षा गार्ड प्रमुख एसएसपी प्रेम चन्द उद्धारमा भद्रगोल भएको स्विकार्न तयार छैनन् । कुनै कसर बाँकी नराखी उद्धार गरिएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘दुर्घटनालगत्तै सुरक्षाकर्मी उद्धारमा खटिएका हुन् । दमकलले आगो निभायो । अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थलाई आगोले टिप्ने डरले विशेष खालको ‘फम’ प्रयोग गरियो, घाइतेलाई विमानस्थलको मूलगेटबाट लैजाँदा समय लाग्ने भएकाले भन्सारतर्फको गेट प्रयोग गरियो ।’
विमानस्थलभित्र हुन सक्ने दुर्घटनाको क्षति न्यूनीकरण गर्न र यात्रुको उद्धार गर्न प्रत्येक वर्ष सुरक्षाकर्मीले काल्पनिक घटनाको रिहल्सन (डेमो) गर्ने गर्छन् । त्यसवेला दुर्घटना भएको दुई मिनेटमै घटनास्थलमा सुरक्षाकर्मी पुगेको र उद्धारमा खटिएको देखाइन्छ । तर, सोमबार भएको दुर्घटनामा रिहल्सनमा गरिएझैँ दुई मिनेटमै सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पुगेको देखिएन । न त उद्धार नै छरितो भयो । तर, एसएसपी चन्द भने १० मिनेटभित्र यो सब काम भएको भन्दै काम चुस्त भएको दाबी गर्छन् ।
विमानस्थलभित्र क्षणभरमै सयौँको भिड
विमानस्थलको सुरक्षा अति संवेदनशील मानिन्छ । अत्यावश्यक जाँच गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणले विमानस्थलमा प्रवेश पाउँछन् । तर, सोमबार दुर्घटनाग्रस्त जहाज जलेको हेर्न दर्जनौँ सर्वसाधारण घटनास्थलमै पुगे । कतिपय चप्पलसमेत नलगाई घटनास्थलतर्फ हान्निएका देखिन्थ्यो । उनीहरू हात हल्लाउँदै ‘अलिहेसम्म उद्धारका लागि सेना प्रहरी आएको छैन’ भन्दै थिए । यतिसम्म कि रमिता हेर्न केटाकेटीसमेत पुगेका थिए । त्योभन्दा ठूलो भिड विमानस्थलको पूर्वी–दक्षिणतर्फको पेप्सिकोलातिरको गेटमा देखिन्थ्यो । यही गेटबाट सर्वसाधारण विमानस्थलभित्र छिरेका थिए । घटनास्थलमा सर्वसाधारणको भिड बढेपछि गेटमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले अरूलाई भने भित्र जान रोकेको थियो । त्यसैले गेटमा भिड बढेको थियो ।
तर, एसएसपी चन्द विमानस्थलभित्र सर्वसाधारण नछिरेको दाबी गर्छन् । ‘विमानस्थलको कुनै पनि गेटबाट सर्वसाधारण घटनास्थल छिरेका छैनन् । मिडियाकर्मीलाई समेत घटनास्थल छिर्न रोक लगाइएको थियो । टाउजर र हाफपाइन्टमा देखिएका त सिभिलमा खटिएका सुरक्षाकर्मी हुन् । तत्काल उद्धारमा खटिनुपर्ने भयो । त्यसैले उनीहरू जस्तो अवस्था थिए, सोही अवस्थामा उद्धारमा खटाइएको हो,’ चन्दले दाबी गरे ।
डा. वस्तीका अनुसार सोमबार रातिदेखि मृतकको हुलिया र जाहेरीसहितको विवरण बुझ्ने काम भइरहेको छ । विवरण बुझ्ने, पोस्टमार्टम गर्ने र परिवारका सदस्यलाई शव बुझाउने प्रक्रिया भएकाले केही दिन लाग्ने उनले बताए । सबैको विवरण बुझेपछि फरेन्सिक मेडिसिन विभागले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट मृतकका परिवारका सदस्यलाई दिनेछ ।
नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइएका विमानका पाइलट अबिद सुल्तानको पनि मंगलबार मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ५० पुगेको छ । सोमबार अवतरणका क्रममा अनियन्त्रित भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।
२४ घन्टामा १४ शवको मात्रै विवरण संकलन
विभागले सहजताका लागि क्रमैसँग विवरण संकलन गरिरहेको छ । एउटा शवको नमुना संकलनमा तीन घन्टासम्म समय लाग्ने भएपछि सोमबार रातिदेखि चिकित्सकहरूले १० वटा शवको मात्रै नमुना संकलन सकाएका छन् । ‘स्रोत–साधनको अभावले काममा गम्भीर समस्या देखिएको छ,’ एक चिकित्सकले भने, ‘आवश्यक सहयोगका लागि विभागले पटक–पटक सरकारलाई आग्रह गरे पनि चासो नदिँदा भवितव्यको समयमा समस्या पर्ने गरेको छ ।’
सबैभन्दा सजिलोसँग पोस्टमार्टम गर्न दाँत र औँलाको छाप आवश्यक हुन्छ । त्यसबाहेक औँठी, सिक्री, लुगा, जुत्तालगायत सामान भए पनि सनाखत केही सहज हुन्छ । ‘हामी शवका स्याम्पल भेट्छौँ, तर परिवारका सदस्यले शवसँग तुलना गर्ने स्याम्पल हामीलाई दिन सकेका छैनन् । यसकारण पनि समस्या देखिएको छ,’ वस्तीले भने ।
कम्तीमा ४० शव चिन्नै नसक्ने गरी जलेका छन् । सबै भाग जलेकाले कोठी र दागहरू खोज्न चिकित्सकलाई असहज भएको छ । विभागका अनुसार अहिलेसम्म युएस बंगला एयरलाइन्सका कर्मचारी कुनै प्रमाण लिएर उपस्थित भएका छैनन् । उनीहरूले विवरण नदिँदा समस्या भएको विभागले जनायो ।
पाँच दिनमा सके ठूलो उपलब्धि
विभाग सबै किसिमका सामानको अभावमा गुज्रिरहेको अवस्थामा पाँच दिनमा रिपोर्ट तयार गर्न सके ठूलो उपलब्धि हुने डा. वस्तीले बताए । ‘पाँच दिनमा सबै शवको पोस्टमार्टम सकियो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भने ।
#जहाज दुर्घटनाले उब्जाएका सात प्रश्न